Indlela Yokuqala Ukugcinwa kweZinyosi
Ukugcina izinyosi kungaba yinto yokuzilibazisa yangaphandle, kodwa futhi ingakhula ibe ibhizinisi eligcwele lokuhweba. Umthengisi wezinyosi ozohweba uzokwazi ukunikeza izinsizakalo zokuvota nokukhiqiza imikhiqizo ehlobene nezinyosi efana noju, propolis kanye ne-wax futhi angakwazi ukufundisa nokuqeqesha abashayeli bezinyosi ezintsha. Nokho, ukufuya izinyosi kuyasebenza kanzima kodwa kuyoba nomvuzo ngisho nangokwesitshalo esincane kunazo zonke sokuzilibazisa ngezinyosi.
I-South African Bee Industry Organisation 'SABIO' ihlukanisa phakathi kwabadobi bezinyosi, abanamakhola ayi-100 kuya kwabangu-100, nabanyosi bezohwebo abaphatha izinyosi eziyizinkulungwane ezingu-800 kuya ku-10 000. Abanikazi bezinhlanzi noma abathuthuki bezinyosi bezokuthuthukiswa kwezinyosi bangase babe nezinyosi eziyi-10 kuya kwezi-150. Lezi zivame ukugcinwa futhi zilawulwe emibuthanweni yokusebenzisana noma njengamaphrojekthi okuthuthukiswa komphakathi.
Ngaphambi kokuqala ukufuya izinyosi cabangela lokhu:
Ukugcina izinyosi kufana nokuphatha izilwane-udinga ukuzinakekela, qinisekisa ukuthi ziphilile futhi ziphephile, zinokudla, amanzi nokuthi kukhona isikhala sokwandisa. Futhi, ukufuya izinyosi kungaba umsebenzi olukhuni. Uzodinga ukusingatha izinyosi ezinzima ezigcwele uju kanye nezinyosi ezihamba ngezinyosi ezivela e-apiary kuya e-apiary ukuze kutholakale impova. Ngesikhathi sehlobo, kuzodingeka uhlole amathumba masonto onke-ukuthola ukuthi ikholoni inezinkosikazi ezincane, isikhala esanele sokwandisa ama-brood ayo futhi uhlole noma yiziphi izifo.
Izinto Ezidingekayo Ekugcineni iZinyosi
Lapho uqala njengomqashi wezinyosi, ngokuvamile uzodinga izinto ezine:
Kuzodingeka ufunde mayelana nezinyosi nokuloba. Owokuqala ukuqonda okuyisisekelo ukuthi inyosi ye-bee, ebizwa ngokuthi 'ikholoni' ihlelwe kanjani. Uzodinga futhi ukwazi nge-physiology yezinyosi, izifo zezinyosi, imisebenzi yezinyosi ezihlukene emhlathini nokuthi kanjani izinyosi zezinyosi, kubutha ukudla emvelweni.
Into yesibili isidingo somlimi wezinyosi omusha siyisayithi sokubeka ubhontshisi wokuqala. Lokhu kungaba yinsimu yezithelo, i-grove yezihlahla 'isb. Eucalyptus' noma insimu yezitshalo zezimbali 'isb. Anyanisi'.
Okwesithathu umlimi omusha wezinyosi uzodinga i-beehive ne-koloni yezinyosi. I-beehive enhle iyoba lula ukuyenza, izogcina izinyosi ziphephile futhi zinikeze indawo yokwakha ama-honeycombs azo futhi zikhulise izingane zazo.
Okokugcina kubalulekile ukuthi ube nezingubo ezifanele, ukunciphisa izinyosi, kanye namanye amathuluzi okusekela okuyisisekelo.
Qinisekisa ukuthi awunayo i-allergic kuya ku-bee stings. Khumbula, ngokuvamile ukuphendula okweqile akubonisi nge-sting yokuqala, imithwalo yemvelo ingase iqale ukubonakalisa ngemva kokushaya okuphindaphindiwe. Khuluma nodokotela wakho ukuze ugcine imithi efanelekile.
Bonke abafuyi bezinyosi kumele babhalise noMnyango Wezolimo, Amahlathi Nezokudoba 'DAFF'. Ukubhaliswa kwenzeka phakathi kuka-1 kuJanuwari no-31 Mashi futhi mahhala. Sesha i-DAFF yefomu lokubhalisa 'bezinyosi zezinyosi'.